Zọ ịlaghachi ekwentị ekwentị gam akporo furu efu | Akụkọ akụrụngwa
N'oge ọ bụla ọnọdụ a nwere ike ime anyị, ya bụ, na pma ọ bụ ntakịrị nlekọta na ekwentị gam akporo furu efu, ihe pụrụ ịdị na-eme ọbụna n'ime ụlọ nke aka anyị ma anyị amaghị kpọmkwem ebe anyị hapụworo ya.
Enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa na weebụ nke anyị nwere ike iji nwaa ịmata kpọmkwem ebe dị ebee ka ekwentị gam akporo anyị dị, enwere ngwaọrụ ole na ole akwụ ụgwọ ma ndị ọzọ bụ n'efu. N'isiokwu a anyị ga-ekwupụta 2 n'ime ha, ha abụọ ga-eji ha kpamkpam n'efu ọ bụ ezie na ụfọdụ esemokwu ndị bara uru iburu n'uche tupu i jiri nke ọ bụla.
1 Alternativezọ ọzọ iji chọpụta ebe ekwentị mkpanaka anyị dị
2 Nke abụọ ọzọ naghachi anyị furu efu gam akporo ekwentị mkpanaaka
Alternativezọ ọzọ iji chọpụta ebe ekwentị mkpanaka anyị dị
Na aro abụọ anyị na-enye n'isiokwu a, anyị ga-akwado onwe anyị n'iji ụfọdụ ngwa, nke anyị ga-enwerịrị ibudata na ụlọ ahịa Google play. Ozugbo emere ka okwu a dokwuo anya, anyị ga-eme ya kwadoro dị ka ihe mbụ maka atụmatụ B, ngwá ọrụ ị nwere ike ibudata kpamkpam na ụlọ ahịa.
Ọ bụ ezie na iji ya dị mfe dịka anyị nwere ike iche n’echiche, ngwa ọrụ ya nwere ike ịdị eji naanị na sistemụ arụmọrụ gam akporo 2.3 gam akporo kacha (enwere ndakọrịta ụfọdụ na gam akporo 2.0); ma n'ihi gịnị ka ngwá ọrụ a ji arụ ọrụ naanị na Gingerbread? Dị ka onye mmepe ahụ si kwuo, sistemụ arụmọrụ gam akporo kachasị dị ugbu a enweghị ụfọdụ ngwaọrụ na, n'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na gam akporo 2.3 nwere ha, nke a na-eji iji wụnye Remotely na ekwentị furu efu, nke ga-enyere onye ọrụ na onye ọrụ aka, ka nwere ozi Kpọtụrụ ihe ọmụma gbasara ebe ekwentị mkpanaaka gị dị.
Ugbu a, ọnọdụ a nwere ike ịbụ ezigbo enyemaka maka ndị nwere sistemụ arụmọrụ a, ọ bụ ezie na ha na-echebara na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ ugbu a nwere ngwaọrụ mkpanaka nke karịrị Android 4.0, ngwá ọrụ ahụ agaghị arụ ọrụ na ngwa ndị dị otú ahụ; N'ihi nke a, anyị ga-akwado ọzọ ọzọ mgbe ị na-achọ ịghachite furu efu gam akporo ekwentị mkpanaaka.
Nke abụọ ọzọ naghachi anyị furu efu gam akporo ekwentị mkpanaaka
Anyị ga-adabere na ngwa, nke nwere aha Gam akporo Echefuola; Iji jiri ngwá ọrụ a, anyị ga-ebu ụzọ debanye aha na saịtị ọrụ ya (onye njikọ anyị na-ahapụ na njedebe nke isiokwu ahụ). Tozọ iji nwetaghachi ekwentị anyị furu efu bụ n'iji ihe ozo di iche nke puru ibu mbadamba ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka ndị ọzọ nwere sistemụ arụmọrụ Android. Site na otu a anyị ga-enwe ohere ịnyagharịa site na ọrụ dị iche iche nke onye nrụpụta nyere anyị, na weebụsaịtị ya.
Enwere ike ịsị na ngwa ọrụ a bụ nke zuru oke na ngwaọrụ niile dị na taa, ebe ọ bụrụ na ekwentị anyị furu efu, anyị nwere ike ịmata ebe ọ bụ site na ọrụ ya dị iche iche; Okwesiri ighota na ma oburu na ekwentị mkpanaaka adighi n'aka anyi, anyi aghaghi izipu ozi SMS ka anyi megharia ya maka nyocha anyi, ihe na eme dika iwu di anya ma kọwaa ya:
androidlost debanye aha
Na mkpu mkpuchi. Site na ngwaọrụ dị iche anyị nwere n'aka anyị, anyị nwere ike ịnye iwu ka a rụọ ọrụ mkpọtụ na kwa ụda (ihuenyo ahụ na-enwu) na ekwentị mkpanaaka anyị. Nke a ga - enyere anyị aka inwetaghachi ya ma ọ bụrụ n ’ụlọ anyị ma ọ bụ naanị, menye ndị omekome egwu ya ụjọ.
Ọnọdụ na maapụ. Nke a bụ enyemaka ọzọ kachasị mma, ebe ọ bụrụ na ekwentị mkpanaaka dị na mpụga ụlọ anyị ma ọ bụ ọfịs, anyị nwere ike ịmegharị nhọrọ a iji mara kpọmkwem ebe ọ dị, na-eji Google Maps.
Izipu ozi SMS sitere na PC. Dị ka ibe weebụ bụ ebe anyị debara aha na gam akporo Lost, site na PC nkịtị anyị nwere ike izipu ozi SMS na ekwentị anyị furu efu, ma ọ bụrụ na anyị echee na onye nwere ya n'aka ha, ga-eweghachi ya ka anyị.
Kpọchie ekwentị. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịgbake ngwa ngwa ekwentị gam akporo anyị, anyị nwere ike igbochi ya na ngwaọrụ ọzọ. Ekwentị mkpanaka furu efu ga-agbanyụ, na-egosi ihuenyo akpọchiri na arịrịọ maka ịbanye paswọọdụ mgbe agbanyere ya.
Kọwaa ọdịnaya ọdịnaya. Ọ bụrụ na anyị nwere ozi dị mkpa na ime ma ọ bụ mpụga micro SD, anyị nwekwara ike ihichapụ ya iji gbochie mmadụ iji ya eme ihe na-adịghị mma.
Enwere ọtụtụ ọrụ ị nwere ike iji rụọ ọrụ na nke ọ bụla n'ime nhọrọ abụọ ahụ anyị kpọtụrụ aha, ọ bụ ezie na ị kwesịrị ị na-echekarị ndakọrịta nke ngwaọrụ ọ bụla na ụdị dị iche iche nke sistemụ arụmọrụ gam akporo dị ugbu a.
Ozi ndị ọzọ - Ngwa iji chọta mobiles furu efu
Isi mmalite - Atụmatụ B, Gam akporo Echefuola, Gam akporo Echefuola Web
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Etu ị ga-esi nwetaghachi ekwentị ekwentị gam akporo gị